तरुलको केक खाने हो? यसरी... :: प्रकाश ढुंगाना :: Setopati
तरुलको केक खाने हो? यसरी बनाउनुहोस्
आज माघे संक्रान्ती। यस दिन तरुल, सखरखण्ड, चाकु, तिलको लड्डु लगायतका परिकार खाने प्रचलन छ। चिसो दिनमा तरुल, सखरखण्ड खानु शरीरका लागि फाइदाजनक पनि छ। तरुलले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ।
तरुलमा भिटामिन सी र बी १६ पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। यसले गर्दा तरुलको नियमित सेवन गर्ने हो भने त्यसले ‘टिस्यु रिपेयरीङ’ तथा ‘वाउण्ड हिलिङ’ गर्न मद्दत गर्छ। यसले बाथ रोग तथा कब्जियत भएका बिरामीलाई समेत लाभ पुर्याउँछ।
तर काँचो तरुलमा ‘डियोस्किारिन, डियोस्गेनिन लगायतका टक्सिक हुने भएकाले यसको बोक्रा ताछेर तथा पकाएर मात्र खाने गर्नुपर्छ।
सामान्यतय माघे संक्रान्तीका दिन तरुल उसिनेर खाने चलन छ। त्यसबाहेक तरकारी खाने गरिन्छ। यदी पकाउन जान्ने हो भने यसबाट अनेक परिकार समेत तयार पार्न सकिन्छ।
हामी तपाईलाई एक जना सेफको सहयोगमा घरमै बसेर तरुलको नयाँ परिकार तयार बनाउन सिकाउँदै छौँ। हामीले सिकाउन लागेको परिकार हो, तरुलको केक।
तयार पार्न लाग्ने समयः एक घण्टा
पकाउने समयः ४५ मिनेट
बोक्रा ताछिएको तरुल­ ५०० ग्राम
ड्राइ च्याउ मसिनो टुक्रा हुने गरी काटिएको ­ १०० ग्राम
मसिनो गरी काटेको मुला÷गान्टे मुला­ ५० ग्राम
मासुको किमा­१०० ग्राम (मासु नखानेहरुले यो नराखी समते पकाउन सक्नेछन्)
छोडाएर मसिनो टुक्रामा काटिएको ६ कोठी लसुन
छोडाएर मसिनो गरी टुक्रामा काटिएको ६ दाना प्याज
मैदा र पिठोको पेस्ट (बाटर)
बाटर (मैदा र पिठोको पेस्ट) बनाउन चाहिने सामान
चामलको पिठोः ५०० ग्राम
५० ग्राम चालिएको मैदा
नुन­एक टेबल चम्चा
पाँच मसला­ एक टेबल चम्चा
२ चम्चा फ्राइ गरिएको प्याज
मसिनो गरी काटिएको २ चम्चा हरियो लुसुनको पात
काटिएको रातो खोर्सानी एक चम्चा
भुटेको सेतो तिल एक चम्चा
सर्वप्रथम उसिनेको तरुलको बोक्रा छिल्नुहोस र मसिनो हुने गरी (लगभग एक सेन्टिमिटर क्युबको आकारमा) काट्नुहोस।
ड्राइ च्याउलाई नरम हुन्जेल भिजाउनुहोस। पूर्णरुपले नरम भइसकेपछि त्यसलाई सुख्खा हुन दिनुहोस र मसिनो गरी सानो पिसमा काट्नुहोस्।
अब गान्टे मुला वा मुलालाई पानीमा भिजाउनुहोस र त्यसको नुनिलोपन गएपछि निकालेर मसिनो टुक्रामा काट्नुहोस।
अब प्याज र लसुनलाई मसिनो हुने गरी काट्नुहोस्।
मासुलाई सानो पिसमा काट्नुहोस (क्युब आकारमा) यसबाहेक बाटर तयार पारेर राख्नुहोस। यसका लागि ५०० ग्राम चामलको पिठो र ५० ग्राम मैदालाई मनतातो पानी मिसाएर चम्चाले राम्रोसँग चलाई पेस्ट बनाएर राख्नुहोस्।
अब पकाउने पालो
ग्यास चुलोलाई मध्यम हुने गरी बाल्नुहोस। त्यसमा कराई वा अन्य कुनै तरकारी पकाउने भाँडो बसाउनुहोस।
भाँडो तातेपछि २ चम्चा तेल हाल्नुहोस र तेल तातेपछि त्यसमा अघि काटिएको प्याज र लसुनलाई रातो हुन्जेल फ्राइ गर्नुहोस। त्यसपछि यसमा अघिको च्याउ, मुला वा गान्टेमुला हाली केही बेर चलाउनुहोस।
केही बेर चलाएपछि अब त्यसमा मासु हाल्नुहोस र पाक्न दिनुहोस्। यसलाई पकाउनलाई थोरै पानी हालेर सुक्न दिनुपर्छ।
मासु पाकेपछि अघि तयार पारेर राखेको तरुल हाल्नुहोस र केहीबेर सबैलाई चलाउनुहोस। यसो गर्नाले तरुलमा खैरो रङ्ग देखिन थाल्छ। खैरो रङ्ग देखिएपछि तरुलको परिकार बसाएको आगो निभाउनुहोस्।
अब ‘स्ट्रिमिङ ट्रे’ (बफाउने भाँडो) ठिक पार्नुहोस र त्यसमा भर्खर पकाएको तरुलको परिकारलाई ट्रेमा सबैतिर ढाक्ने गरी काँटाले राम्रोसँग मिलाउनुहोस। यसलाई ममजस्तै बफाएर तयार पार्नुपर्छ।
ट्रेमा सबैतिर ढाकिने गरी मिलाएपछि अब स्ट्रिमरभित्र पानी तथा माथि ट्रेमा मिलाएर तयार पारिएको तरुलको परिकारलाई राखेर ‘स्ट्रिम’ गर्नुहोस।
उच्च तापक्रममा त्यसलाई ४५ मिनेट वा नपाकुन्जेलसम्म स्ट्रिम गर्नुहोस। पाके वा नपाकेको थाहा पाउन लामो काँटाले त्यसलाई घोचेर जाँच्न सकिन्छ।
केक पाकेपछि त्यसलाई स्ट्रिमरबाट निकाल्नुहोस र सफा प्लेटमा राख्नुहोस। चिसो भएपछि त्यसमाथि फ्राइ गरी तयार पारेर राखेको प्याज, खुर्सानीका टुक्रा तथा सेतो तिल सबैतिर पुग्नेगरी छर्कनुहोस।
यती गरेपछि तरुलको केक खानलाई तयार हुन्छ। अब यसलाई केकका रुपमा सर्भ गर्न सकिन्छ। यसलाई सर्भ गर्दा स्न्याक्सका साथमा अचार, घ्यु वा ससेजसँग सर्भ गर्दा उचित हुन्छ।
(यो परिकार पकाउने विधि दुई दशकदेखि क्रियाशील वरिष्ठ सेफ कुमार चालिसेको सहायताले तयार पारिएको हो। उनी अष्ट्रेलियको ‘टेफ एनएसडब्लु’ नामक संस्थाद्धारा ‘ट्रेनिङ एण्ड एसेसमेन्ट’ का लािग ‘सर्टिफाइड’ सेफ हुन्।
हाल उनी बाजेको सेकुवामा कर्पोरेट सेफ तथा काठमाडौँको ‘गेट कलेज’ मा सेफ तथा निरिक्षकका रुपमा कार्यरत छन्। त्यस्तै उनले पाक् शाष्त्रमा आधारित तीन पुस्तक लेखेका छन् भने नेपाली खानाका परिकारहरुको इतिहास सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशनको क्रममा रहेको छ। यस बाहेक उनले डेढ दर्जनभन्दा बढि देशहरुमा नेपाली खानाका विभिन्न परिकारहरुको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरु समेत आयोजना गरेका छन्।)
प्रकाशित मिति: आईतबार, पुस ३०, २०७४, ०९:२३:००